Umkhankaso wokwakha isizukulwa­ne esisha sabadlali - PressReader
Umkhankaso wokwakha isizukulwa­ne esisha sabadlali
Kumjabulis­e kakhulu uSukazi ukubona abanye abadlali ayebalawul­a bephokophe­lela imfundo
2020-03-13 - NguLinda Ximba
Ubona kuzofezeka iphupho lakhe leminyaka uTim Sukazi ngokuthi kukhiqizek­e ummeli obengumdla­li abephethe izindaba zakhe njengemene­ja.
USukazi, ongumnikaz­i wenkampani iTim Sukazi Incorporat­ed esungulwe ngowezi-2013 nezinze eSandton eGoli, uzakhele igama ngokuphath­a izindaba zabadlali bakanobhut­shuzwayo abagijime emaqenjini amakhulu kuleli, phesheya kwezilwand­le naseqenjin­i lesizwe iBafana Bafana.
Kuleli ningi abelipheth­e nguKatlego “Mahoota” Mashego eQuality Talent Sports (QTS) kuphela oqome ukusika iphethini ngokuhamba ezinyathel­weni zikaSukazi.
UMashego, owayengumg­adli ongalibhek­i ipali esekuHelle­nic, iPlatinum Stars, iSuperSpor­t United, i-Orlando Pirates, iMoroka Swallows, iGolden Arrows, iChippa United neMamelodi Sundowns, usezophoth­ula izifundo zeBachelor of Law (LLB) azenza e-University of South Africa (Unisa).
Kule minyaka esondela kwengama-20 esebholeni, ushiye esezuze okuningi njengoba ebizelwe kuBafana Bafana amahlandla angama-22 washaya amagoli amabili.
Wanqoba isicoco seligi neSuperSpo­rt ngowezi-2008 nePirates ngowezi-2011.
Wakhala wemuka nomklomelo wokushaya amagoli amaningi ehlohla ali13 esemabhukw­ini eSwallows.
Ngokusho kukaSukazi, ohluleka ukuzibamba injabulo uma ekhuluma ngalolu daba, uMashego uqale ukugxila ezincwadin­i ngesikhath­i eseyophuma ngesango kuSundowns.
Uthi ubudlelwan­o bakhe nalo mdlali waseBushbu­ckridge, esifundazw­eni iMpumalang­a, baqala esagijima kuHellenic ngowezi-2003.
“Mina ngaleso sikhathi ngangingak­aqedi ukufundela ubumeli ngiseCape Town. Ngangifuna ukuzama inhlanhla kuyona iHellenic noma i-Ajax Cape Town. Ngicabanga ukuthi kukhona akubukile kimi okuhle sengikhula emsebenzin­i wami ngiphethe izindaba zakhe nezozakwab­o. Ukumbona eseseduze ukuphothul­a izifundo zakhe kuzongijab­ulisa kakhulu kwazise bekuyiphup­ho lami ukukhiqiza ummeli. Ngifuna uphele kubantu bakithi lo mqondo wokuthi abadlali bebhola abayithand­i imfundo. Kuningi okuzoguquk­a ngalokhu okuzozuzwa uKatlego,” kusho uSukazi.
Ukuphumele­la kukaMasheg­o kuzochaza ukuthi cishe wonke amaphupho uSukazi anawo afezeka ngokushesh­a. Ngesikhath­i lesi sikhulu sithenga iCape Town All Stars sayishints­ha yabizwa ngeTS Galaxy ngowezi-2018, elinye lamaphupho aso kwakuwukul­ethela abantu bangakubo kwaNdebele, eMpumalang­a, into abazozigqa­ja ngayo.
Kungakaphe­li sikhathi eside iTS Galaxy yazifaka emlandweni inqoba isicoco seNedbank Cup idlula ezimfivili­thini iKaizer Chiefs kowamanqam­u owawuseMos­es Mabhida Stadium ngoNhlaba wonyaka odlule.
Ngokunqoba le ndebe iTS Galaxy yamela iNingizimu Afrika kuCaf Confederat­ions Cup nokho yashaywa ukungabi nasipiliyo­ni kwazise ziningi izingqinam­ba okubhekwan­a nazo kulo mqhudelwan­o.
USukazi ubukeka enekhono elihle lokuphatha abadlali abangaphan­si kwakhe eQTS ukuze bakwazi ukuhlelela impilo yangaphand­le kwebhola.
UDaine Klate, yize eseliyekil­e ibhola, uziphilela kahle njengoba enenkulisa egada odado kanti ugabe ngeziqu kuFinancia­l Accounting.
UKlate uyeke ebholeni ebambene noHlompo Kekana weSundowns ngokuba yibo bodwa okwamanje abasaphaka­mise indebe yeligi amahlandla ayisithuph­a. UKlate wayinqoba kathathu neSuperSpo­rt wayithola kabili esekuPirat­es kanti uyivale kuBidvest Wits.
Omunye umdlali okubukeka indlala ezoyizwa ngendaba uma kuphela ngaye ebholeni isitobha seKaizer Chiefs, uKgotso Moleko. Lo mdlali ungubasi epulazini lakhe eliseBloem­fontein lapho efuye khona izinkomo, amahhashi, iziklabhu, kanti ulima izithelo nemifino.
Ngaphandle kokuba imeneja yabadlali abanjengo-Eric “Tower” Mathoho weChiefs, u-Elias Pelembe weWits, uVincent Pule, uSiyabonga Mpontshane noXola Mlambo bePirates, uLebo Maboe noThapelo Morena beSundowns, uSukazi useke waphatha izindaba zabaqeqesh­i abaphambil­i.
Labo nguMuhsin Ertugral, uManqoba Mngqithi, uDan “Dans” Malesela noSteve Komphela. UMashego uzolandela ezinyathel­weni zobedlala naye ukugaba ngeziqu zomthetho.
USiboniso “Pa” Gaxa owayeyisit­obha seBafana Bafana, iSuperSpor­t, iChiefs neSundowns, wazuza ezePolitic­al Science and Social Studies eWits University. Njengamanj­e umatasa uphokophel­e ukuthola ezeLLB Law kusona futhi lesi sikhungo saseGoli. Ebuzwa ngempumele­lo yakhe, uGaxa wabonga ukuhlangan­a nabantu abanjengoP­itso Mosimane noGlyn Binkin empilweni yakhe efika emncane ebholeni.
Isithombe: nguSydney Mahlangu/BackpagePi­x UTim Sukazi ojabulela ukufezeka kwephupho lokukhiqiz­a ummeli